၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၂) Skip to content
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၂) ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၂) မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၁၁ မိနစ်	မဇ္ဈိမ၏ ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းတခု ဖြစ်သော M-ZINE+ က ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များအနက် အထူးခြားဆုံးအဖြစ် အပျက်ကြီး ၁၀ ခုကို အယ်ဒီတာ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားပါသည်။ယင်းတို့အနက် အမှတ် ၁ဝ မှ ၃ အထိကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယခု အမှတ် ၂ ကိုဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ကာ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် အထူးခြားဆုံး ဖြစ်ရပ်ကြီးဖြင့် အဆုံးသတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(အမှတ်စဉ် ၂) NLD ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက သမိုင်းအချိုးကွေ့တစ်ခုအဖြစ် သမိုင်းပညာရှင်များက သတ်မှတ်ခဲ့ပလိမ့်မည်။ မဲဆန္ဒနယ် ၄၅နေရာအနက် NLD က ၄၄ နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အာဏာအနေထားအရ အမတ် ၄၄နေရာဆိုသည်မှာ ပြောပလောက်သော ပမာဏ မဟုတ်ပေ။ စစ်တပ်အနေဖြင့် ပါလီမန်နောက်ကွယ်မှ မည်ကဲ့သို့ လှုပ်ရှားနေသည်ကို လည်း မသိရသေးပေ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် NLD ရရှိသော အမတ် ၃၇နေရာသည် ၁၁ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ အချိုးပါဝင်နေသေးပြီး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရလည်း စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေခြင်းကလည်း USDAလို အာဏာရပါတီဘက်က အလေးသာနေသည်။ကြားဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲသည် အစိုးရနှင့်အတိုက်ခံများ သမိုင်းဝင်သော လိုက်လျောသဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ NLDအနေဖြင့်လည်း ၁၉၉၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အား အသိမှတ်ပြုရမည်ဆိုသော အတွေးခေါ်အား စွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။NLD အမတ်များ အနေဖြင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်လာနိုင်ပြီး အပြောင်းလဲကို လွှတ်တော်တွင်းမှ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍လာမည့် ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အနေဖြင့် အနိုင်ရရှိနိုင်သလို သိုမဟုတ်ပါက အာဏာရပါတီကို ထိရောက်စွာ အတိုက်ခံလုပ်နိုင်သော ပါတီကြီးဖြစ်လာနိုင်ပေသည်။အတိုင်းတာတစ်ခုအရ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် အာဏာရပါတီအနေဖြင့် သူတို့၏အခန်းကဏ္ဍကို တဖြည်းဖြည်းလျော့ချပြီး၊ အကယ်၍ ရွေးကောက်ပွဲများဆက်လက်ကျင်းပနိုင်မည်ဆိုက အတိုက်ခံများကို အထိုက်အလျောက် လမ်းဖွင့်ပေးပြီး ၁၉၉၀ခုနှစ်များက တောင်အာဖိရိက အမျိုးသားပါတီကဲ့သို့ တဖြည်းဖြည်း နောက်ကွယ်သို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်သည်။နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအပြောင်းလဲများက ကာလတို၊ကာလရှည်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံအရပေးအပ်ထားသော လွှတ်တော်တွင် စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်နေခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်မည်၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးများကို မည်ကဲ့သို့ကိုင်တွင်ရမည်ဆိုသောမေးစရာမေးခွန်းများစွာ ကျန်ရှိနေသေးသည်။ လိုချင်သော ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝရန် ရှိရင်းစွဲနေရာက စတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးသမားများက ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၁) ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၃) ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၄)	၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်း အဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၆)	၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်း အဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၈)	၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်မှ အထူးခြားဆုံး အဖြစ်အပျက်ကြီး ၁၀ ခု (အမှတ် ၉)	M-ZINE+ ပုံနှိပ်ဗားရှင်း မဇ္ဈိမ စတင်ဖြန့်ချိ	Who is Online
We have 275 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved